အဂြဲ႐ုိးမတိုင္ခင္ အသင္းတစ္သင္းအတြက္ စံခ်ိန္တင္သြင္းဂုိးပုိင္ရွင္မ်ား
6 Aug 2018 . 12:45 PM
ၿပီးခဲ့တဲ့ ကြန္ျမဴနတီဒုိင္းပဲြမွာ မန္စီးတီးတိုက္စစ္မွဴး အဂြဲ႐ုိး Aguero က မန္စီးတီးကစားသမားဘ၀ ဂုိး(၂၀၀)ျပည့္နဲ႔ (၂၀၁)ဂုိးေျမာက္ ဂုိးေတြကုိ သြင္းယူခဲ့တယ္။ အဂြဲ႐ုိးဟာ အရင္ကတည္းက မန္စီးတီးအသင္း သမုိင္းတစ္ေလွ်ာက္ သြင္းဂုိးအမ်ားဆုံးကစားသမားအျဖစ္ ရပ္တည္ေနတာျဖစ္ၿပီး အခုဆုိရင္ အဂၤလန္ေဘာလုံး မသုိင္းမွာ ကလပ္အသင္းတစ္သငး္အတြက္ ဂုိး(၂၀၀)နဲ႔အထက္ သြင္းယူခဲ့တဲ့ (၂၇)ဦးေျမာက္ ကစားသမားျဖစ္လာခဲ့ၿပီ။
သူ႔အရင္ကလည္း ကလပ္အသင္းတစ္သင္းတည္းအတြက္ စံခ်ိန္တင္သြင္းဂုိးေတြ သြင္းယူခဲ့တဲ့ နာမည္ႀကီးကစားသမား အမ်ားႀကီးရွိခဲ့ဖူးတယ္။ အဲဒီထဲကမွ ပရိသတ္ေတြ ရင္းႏွီးၿပီးသား ကစားသမားေတြကုိ ပရိသတ္ေတြသိရွိႏုိင္ေအာင္ ေဖာ္ျပလုိက္ပါတယ္ . . .
ရြန္နီ Rooney (မန္ယူ-၂၅၃ ဂုိး)
လမ္းပတ္ Lampard (ခ်ယ္လ္ဆီး – ၂၁၁ ဂုိး)
အလန္ရွီးယား Alan Shearer (နယူးကာဆယ္ – ၂၀၆ ဂုိး)
အြန္နရီ Henry (အာဆင္နယ္ – ၂၂၆ ဂုိး)
Photo:Evening Express,Toronto Star,The Irish Sun,Getty Images
အင်္ဂလန် ကလပ်အသင်းတစ်သင်းအတွက် သွင်းဂိုးအများဆုံးကစားသမားတွေက ဘယ်သူတွေများလဲ
ပြီးခဲ့တဲ့ ကွန်မြူနတီဒိုင်းပွဲမှာ မန်စီးတီးတိုက်စစ်မှူး အဂွဲရိုး Aguero က မန်စီးတီးကစားသမားဘ၀ ဂိုး(၂၀၀)ပြည့်နဲ့ (၂၀၁)ဂိုးမြောက် ဂိုးတွေကို သွင်းယူခဲ့တယ်။ အဂွဲရိုးဟာ အရင်ကတည်းက မန်စီးတီးအသင်း သမိုင်းတစ်လျှောက် သွင်းဂိုးအများဆုံးကစားသမားအဖြစ် ရပ်တည်နေတာဖြစ်ပြီး အခုဆိုရင် အင်္ဂလန်ဘောလုံး မသိုင်းမှာ ကလပ်အသင်းတစ်သင်းအတွက် ဂိုး(၂၀၀)နဲ့အထက် သွင်းယူခဲ့တဲ့ (၂၇)ဦးမြောက် ကစားသမားဖြစ်လာခဲ့ပြီ။
သူ့အရင်ကလည်း ကလပ်အသင်းတစ်သင်းတည်းအတွက် စံချိန်တင်သွင်းဂိုးတွေ သွင်းယူခဲ့တဲ့ နာမည်ကြီးကစားသမား အများကြီးရှိခဲ့ဖူးတယ်။ အဲဒီထဲကမှ ပရိသတ်တွေ ရင်းနှီးပြီးသား ကစားသမားတွေကို ပရိသတ်တွေသိရှိနိုင်အောင် ဖော်ပြလိုက်ပါတယ် . . .
ရွန်နီ Rooney (မန်ယူ-၂၅၃ ဂိုး)
မန်ယူအသင်းရဲ့ ဂန္ထဝင်တိုက်စစ်မှူးလို့ တင်စားရမယ့် ရွန်နီဟာ မန်ယူအသင်းမှာ ၂၀၀၄ ကနေ ၂၀၁၇ အထိ (၁၃)နှစ်ကြာကစားခဲ့ပြီး ပြိုင်ပွဲစုံ(၅၅၉)ပွဲကစား၊ (၂၅၃)ဂိုးသွင်းယူခဲ့တယ်။ သူက မန်ယူအသင်းရဲ့ သွင်းဂိုးအများဆုံး ကစားသမား ဆာဘော်ဘီချာလ်တန် Sir Bobby Charlton ကို ကျော်ဖြတ်ပြီး အသင်းသမိုင်းတစ်လျှောက် ထိပ်တန်းဂိုးသွင်းရှင်အဖြစ် ရပ်တည်ခဲ့တာပါ။
လမ်းပတ် Lampard (ချယ်လ်ဆီး – ၂၁၁ ဂိုး)
လမ်းပတ်လို ကွင်းလယ်လူတစ်ဦးက ချယ်လ်ဆီးအသင်းရဲ့ သွင်းဂိုးအများဆုံး ကစားသမားအဖြစ် ရပ်တည်နေတာက အံ့အားသင့်စရာပါ။ ဒါပေမဲ့ တိုက်စစ်အားသန် ကွင်းလယ်လူတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ လမ်းပတ်က တော်ရုံလူ မစွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ မှတ်တမ်းတစ်ခုကို စိုက်ထူထားပြီး သူ့ရဲ့မှတ်တမ်းကို ချိုးဖျက်ဖို့က သိပ်တော့ မလွယ်ကူလှပါဘူး။
အလန်ရှီးယား Alan Shearer (နယူးကာဆယ် – ၂၀၆ ဂိုး)
တစ်ခေတ်တစ်ခါက ပရီးမီးယားလိဂ်ပြိုင်ပွဲရဲ့ Goal Machine ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အလန်ရှီးယားအတွက် သွင်းဂိုးတစ်ဂိုးဆိုတာ မခက်ခဲ့ပါဘူး။ နယူးကာဆယ်အတွက် စံချိန်တင် (၂၀၆)ဂိုးသွင်းခဲ့သလို ပရီးမီးယားလိဂ် သမိုင်းတစ်လျှောက်မှာလည်း (၂၆၀)ဂိုးနဲ့ Top Scorer အဖြစ် ရပ်တည်နေသူပါ။
အွန်နရီ Henry (အာဆင်နယ် – ၂၂၆ ဂိုး)
အာဆင်နယ်ပရိသတ်တွေရဲ့ ရင်ထဲမှာ အခုအချိန်အထိ မမေ့နိုင်တဲ့ ကစားသမားတစ်ဦးပါ။ အဲဒီလို မမေ့နိုင်လောက်အောင်ပဲ အွန်နရီရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်၊ ခြေစွမ်း၊ Technique စတဲ့ အရည်အသွေးတွေက တသသပြောစမှတ်ဖြစ်နေဆဲပါပဲ။
ကလပ်အသင်းတစ်သင်းမှာ All Time Top Goal Scorer တစ်ဦးဖြစ်ဖို့ဆိုတာက အရမ်းခက်ခဲတဲ့ ကိစ္စတစ်ခုပါ။ ဒီလို ခက်ခဲတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုကို ရရှိခဲ့ကြသူတွေ၊ စံချိန်သစ်တွေ ထပ်တင်ခဲ့ကြသူတွေက ပင်ကိုယ်အရည်အသွေး မြင့်မားသူတွေဆိုတာ ဘယ်သူမှ ငြင်းနိုင်မှာ မဟုတ်လောက်ပါဘူး။ စံချိန်မှတ်တမ်းဆိုတာ ချိုးဖျက်ဖို့အတွက် ဖြစ်လာတာလို့ ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ ဒီကစားသမားတွေရဲ့ စံချိန်ကလည်း တစ်ချိန်ချိန်ကျရင် ကျိုးပြတ်သွားဦးမှာပါ။ ဒါပေမဲ့ အခုဖော်ပြခဲ့တဲ့ ကစားသမားတွေက ပရိသတ်ရဲ့ ရင်ထဲမှာ ထာဝရရှင်သန်နေဦးမှာဖြစ်ပါတော့တယ် . . .